IFirefoxOS ivuselelwa ngezici eziningi ezintsha | Kusuka kuLinux
IFirefoxOS ivuselelwa ngezici eziningi ezintsha
Ingabe uyazi IFirefoxOS? Cha? Hhayi-ke uma ungazi ngiphakamisa ukuthi ubheke lokhu Ukubuyekeza okuhle kakhulu kudalwe ngomunye wabahlanganyeli bethu ukuze bazi ukuthi kwenzekani.
Kahle IFirefoxOS Ibuyekeziwe futhi iletha ukuthuthuka okuthokozisayo, okuyiqiniso, osekuvele kufaka ezinye izinhlelo ezaziwa kakhulu neziphila isikhathi eside. Ake sibone ukuthi ziyini:
I-MMS: Manje usungathumela futhi wamukele izithombe, amafayela alalelwayo namavidiyo nge-MMS (Multimedia Messaging Service).
I-API yesaziso sohlelo lokusebenza: Onjiniyela bangasebenzisa i-Push ukuletha izaziso ezifika ngesikhathi kuzinhlelo zokusebenza nokunciphisa ukusetshenziswa kwebhethri okuphelele.
I-Responsive Search App manje ingaphambili nesikhungo sesikrini sasekhaya, okwenza kube lula futhi kusheshe ukuthola okuqukethwe okufunayo.
Ngenisa oxhumana nabo kusuka ku-Hotmail noma kwi-GMail, kusuka kwi-SIM khadi Ukungeza oxhumana nabo ku-Facebook manje sekulula kakhulu.
Ukuthuthuka kunketho yokwengeza oxhumana nabo.
Amathiphu lapho ushayela: Qala ukufaka izinombolo zefoni noma amagama kushayela ukuze uthole ngokushesha oxhumana naye othize.
Ukuthuthuka kokusebenza: Zizwa izikhathi zokulayisha ezisebenza ngokushesha nokuskrola okushelelayo.
Manje ungagcina izithombe, umsindo nevidiyo kusuka kusiphequluli kalula.
Ukuthuthukiswa kwekhibhodi: Umbhalo wokuhlola okuzenzakalelayo ulungisa amagama angapelwe kabi ngephutha.
Izithuthukisi ze-imeyili: Imodi yokusalungiswa igcina ngokuzenzakalela ama-imeyili aqhubekayo ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi ukuze ukwazi ukuwaqeda futhi uwathumele ngokuhamba kwesikhathi.
Okunamathiselwe kwe-imeyili komsindo nevidiyo kanye namafayela wesithombe manje kungagcinwa kugalari yakho kalula.
Unganamathisela futhi uthumele izithombe ezivela kugalari yakho ngqo ngaphakathi kohlelo lokusebenza lwe-imeyili.
Usesho Lomculo: Ukucinga ingoma oyithandayo kulula ngesici esisha sokucinga umculo, vele uswayiphele phansi kusuka phezulu kohlelo lokusebenza loMculo ukukhombisa ibha yokusesha uphinde useshe umculo ngomculi, i-albhamu, noma isihloko lengoma.
Ukuthuthuka kwekhalenda: Ungadala imicimbi eqondile, kufanele uchofoze esikhaleni sesikhathi ofuna ukudala umcimbi omusha kukhalenda.
Ikhalenda enezikhumbuzi zemicimbi: setha izikhumbuzi ukwaziswa ngemicimbi yekhalenda.
Izilimi ezingaphezu kwe-15 zisekelwa.
Lezi yizindaba. Ngokwethembeka, ngomkhiqizo omusha onjalo, ngiyajabula ukubona ukuthi basebenzisa kanjani isikhathi namandla abo IFirefoxOS, uhlelo olusebenzisa ubuchwepheshe bewebhu ukusebenza nokuthi kusukela manje kuqhubeke, luphakathi kwezintandokazi zami, nangaphezulu Android.
Umthombo: Ibhulogi yeMozilla
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IFirefoxOS ivuselelwa ngezici eziningi ezintsha
Izindaba ezimnandi. Ngokusobala, sengivele ngijabule ukufaka i-Android 4.2.2 yami ye-Samsung Galaxy Mini (Ngiyabonga XDA neCyanogenMod!) NgeFirefox OS. Kodwa-ke, namanje ayikaqiniswa njengoba bengicabanga. Noma kunjalo, kukhombisa ukuthi kunenqubekela phambili.
I-PS: Kubukeka sengathi amabhulogi emiphakathi esemthethweni yaseMozilla asevele akhonjwa ngokuklanywa kwewebhusayithi efanayo esemthethweni yeMozilla (okokuqala, IMozilla yaseSpain, futhi kamuva, IFirefoxmania).
Idizayini yeFirefoxmania iyadlula .. Ngicabanga ukuthi bazokwengeza entsha kungekudala 😉
Okungenani lokhu onakho manje kuhle kakhulu. Ngiyethemba bazoyithinta kakhulu "iCuba". Okwamanje, ingqikithi yeMozilla WordPress ihlala ikhethekile emiphakathini esemthethweni.
PS: Ngiyethemba thuthukela ku-Firefox Sync ngoba bona Ngingabonga kakhulu ukususa lawo mathokheni amabi futhi ngisebenzise ukubethela kwe-SSL kuzixhumanisi zami enginazo ku-Iceweasel yami.
Ukuze usebenzise iFirefoxOS ukuphela kwakho bekufanele kuvele efekthri nge-Android ICS ngoba kusekelwe futhi kusebenzisa i-kernel eguqulwe yiyo ... iMini iza neGingerbread ngokuzenzakalela.
Ah kuhle. Ukulinda ukujwayela i-Galaxy Mini kusuka ku-XDA Onjiniyela.
Okunye futhi ukuthi awekho amachweba aphumelelayo we-ARMv6 processor (njengaleyo eku-Galaxy Mini) ongasekela kuyo, futhi akukho zinkomba ezithile (ungakhombi ezakwaMozilla, zikhona ezinjengo-4 futhi kukhona ukungasebenzi).
Okuwukuphela kwembobo ye-ARMv6 ephumelele kuze kube manje yileyo yeGeekpshone Zero, kepha isebenzisa iprosesa endala kakhulu nehlukile kune-MSM7X27 ye-Galaxy Mini. Futhi, ikhodi ayiguqulwanga ngokuphelele (njengoba besho, angihlanganisanga ukuhlolela) ama-processor we-ARMv6, ingasaphathwa eyokuthi ngeke basebenze kanye neCortex A5 ye-OT Fire kanye ne-Open.
Ukudabukisa nge-ARMv6 bengilindele itheku elizonikeza impilo iZTE Skate yami nge-ARMv6, njengamanje ngineCyanogem 10.2 (android 4.3) futhi ngijabule kepha bengifuna ushintsho lwendawo futhi uma bekhululekile kangcono i-xD
UJohn uyagebha kusho
Uma kunjalo, imbobo yeFirefox OS kuyo yonke indawo yokuphela yamatheminali aneMTK6577 neMTK6589 ngeke ilimale.
Phendula uJohn Burrows
Inkinga nge-Samsung ukuthi izinto zayo eziningi (uma kungezona zonke) zinobunikazi.
Isizathu sokungathengi i-Samsung njenge-smartphone.
Ngisebenzisa iSamsumg ngoba ebangeni eliphansi naphakathi nendawo yizo ezishibhile ezikhona ...
Uma kunjalo, kufanele ubalule iXiaomi njengenketho yekusasa.
Inkinga enginayo ngamaShayina ukuthi ngiwethemba kakhulu njengama-gringos ... yize i-MIUI ROM yabo iyamangalisa (futhi ingumthombo ovaliwe we-republic "yabantu" base-China).
Noma ngubani unanoma yiliphi icebo lokuthi angasifaka kanjani i-firefox os emulator ngaphandle kwe-plugin yesiphequluli
Cha, ayikho into efana nokuthi ubuze i-xD hhayi ukuthi ngiyazi
Bheka lento, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Firefox_OS/Using_the_B2G_desktop_client
Ngiphuthelwa yingxenye »Lokhu kubuyekezwa kwe-Firefox OS kuzotholakala kubasebenzisi bamanje nakumafoni wonjiniyela kungekudala. Ngeminye imininingwane yokuthi ungawathenga kanjani amadivayisi wonjiniyela, vakashela i-MDN. »..>. <.. Ngifunde le bhulogi nge-rss ku-FxOS yami .. XD, sinethemba lokuthi isibuyekezo sizophuma kungekudala ..
sawubona, uma ngingenaphutha, i-telefonica ifaka izibuyekezo ze-OS kumafoni abo, .. awazi ukuthi ikhona yini indlela yokuqeda lokhu "kuziphatha okusolisayo", futhi uvuselele ngqo neMozilla?
Shhh .. Angishongo lutho ngoba ngifuna ukuthenga eyodwa futhi angifuni ukuthi iphele i-xDDD
ajhaj, okufanayo engakusho, futhi ngakwazi ukuthenga i-OT Fire Blanco, kwakusele abambalwa kuphela .. yize, kuzoba ukushintsha amafoni ngokuzayo, ngoba izinkampani eziningi zehardware zilungiselela ukwethula izingcingo eziphakathi nendawo Lolu hlelo ... ibhalansi yefoni yami .. jojo, ngiyethemba ukuthi i-FxOS iyaqhubeka njengoba iza, futhi ivuselela njalo ezinyangeni ezi-3, ukugingqika kubonakala kuyindlela engcono kakhulu yokuvuselela ..
Enye into engiyithande kakhulu, kuze kube manje, angikaze ngilubone uhlelo lokusebenza lokuqala olunogaxekile, futhi izinhlelo zokusebenza eziningi ziyinsizakusebenza .. 🙂
Ifilosofi ye-mozilla ikufanele ukusekelwa .. nje udinga ukufaka i-firefox ku-qt. XD ..
Luyoba nini usuku lapho singashiya khona i-Android?
Angazi, kepha sengivele ngisebenzisa i-ICS eguqulelwe i-Galaxy Mini (ie i-CyanogenMod 10.1). Ngenza ngokumangalisayo nangcono kune-ROM efakwe kuqala eza nomakhalekhukhwini wami.
I-CM 10.1 yiJelly Bean.
Ngiyethemba ngeTizen, ngiyithande kakhulu iphrojekthi kanye ne-interface.
Impela ngifuna i-xD eyodwa.
Yebo, kunemininingwane ethile ngesibuyekezo ... Iyatholakala, yebo, ihlelelwe i-Geeksphone Keon / Peak yentuthuko (enakekelwa yinkampani efanayo kulabo abavilaphayo: P). Kwabanye abantu abafayo, kufanele silinde uMovistar ukuthi abambisane, kanye nenkampani ukuthi ibambane ... Ngizolinda i-Alcatel ingahlali phansi, ilale phansi! i-xD
Benginethemba lokuthi ngaleyo modeli yokuvuselela i-Rolling, bazosithumela izibuyekezo eziqondile zeMozilla bese zenzelwe othwala ngaphambili. Akuthina sonke esinomshini nokuxhumeka okuhle kakhulu ukuhlanganisa izinhlobo.
Ngakho konke lokho, ngizolinda. Ngiyazi ukuthi kuzokufanele.
ngingayithenga kuphi futhi kanjani? Ngihlala e-Argentina
Ngicabanga ukuthi umhlaba wonke uzofika ngonyaka ozayo.
Ngabe ukhona owaziyo ukuthi angayiphula kanjani i-alcatel eyodwa touch fire noma ayivule
Ngicabanga ukuthi le nguqulo 1.2, akunjalo?
UMiguel Perez kusho
Ngingashintsha i-OS yethebhulethi yami yamaShayina i-PD10 (ine-ICS) bengingayenza kanjani?
Phendula uMiguel Perez
Ngithole inguqulo entsha engizoyifaka futhi njengokuphoqelekile futhi manje i-firefox OS yami ayibhali i-BN lapho ixoxa, kubonakala kufana negciwane